बर्षा राउत विवादमा : नेपाली भूमिको भन्दा भारतीय साथीको चिन्ता !! – Upahar Khabar
बर्षा राउत विवादमा : नेपाली भूमिको भन्दा भारतीय साथीको चिन्ता !!
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १०:२८ May 24, 2020
काठमाडौँ – नायिक वर्षा राउत विवादमा मुछिएकी छिन् । उनले नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादका सन्दर्भमा दिएको एक अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका हुन् । उनको एउटा भिडियो क्लीप सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
बर्षा त्यही रोकिएनन् उनले अगाडी थपिन्, ‘मेरो इन्डियन साथीहरुसँग मैले कसरी फेस गर्ने र मेरो इन्डियन साथीहरुले मसित कसरी फेस गर्ने भइरहेको छ ।’
वर्षा अहिलेसम्म खासै विवादमा नमुछिएकी नायिका हुन् । तर, यो उनको अभिव्यक्ति भने आलोचित बनेको छ । वर्षाका भारतीय साथी उनीसित रिसाउलान् भनेर नेपाली पत्रकारले सीमाको मुद्दा नउठाउने कुरा त हुँदैन होला । फेरि एउटा सेलिब्रिटी हुनुको नाताले आफ्ना इन्डियन साथीलार्ई पनि यो विषय बुझाउने दायित्व उनको हो ।
उनले नेपाली र भारतीय पत्रकारले झगडा पारिरहेको भनेर दुवैलाई एउटै डालोमा हालिदिएकी छन् । जबकि नेपाली सञ्चारमाध्यमले तर्कमा उभिएर प्रश्न गरिरहेका छन् भने भारतीय सञ्चारमाध्यले गालीगलौज मात्रै गरिरहेका छन् ।
उनले मनिषा कोइरालाबाट सिक्नुपर्ने हो, जसले भारतमा आफ्नो ठूलो फ्यान फलोअर्स हुँदा पनि नेपालको पक्षमा आवाज उठाउन डराइनन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु उनी माथि खनिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आजदेखि सुरु
जात नमिल्नेसँग प्रेम गरेको भन्दै गाउँले मिलेर कुट्दा एकको मृत्यु, छ वेपत्ता